श्रीमानबाटै बलात्कार, न्याय खोज्दा बेघर |
श्रीमानबाटै बलात्कार, न्याय खोज्दा बेघर
प्रकाशित मिति :2018-07-13 12:34:24
घटना १ (उदयपुर)
मेरो बिहे भएको ४ वर्ष भयो । बिहेपछि डेढ महिना जति विराटनगर बसेर घर उदयपुरको गाइघाट फर्कियौं । बिहेलगत्तै मैले श्रीमानको नामबाट नागरिकता बनाएँ । विवाह दर्ता पनि भयो । तर, घर आउँदा थाहा भयो, घरमा त उहाँकी श्रीमती पनि रहिछिन् ।
आखिर विवाह भइसक्यो । पहिलो श्रीमती भए पनि सहनु नै पर्यो । सुरुसुरुमा श्रीमानले हामी दुवैलाई राम्रै गर्थे । तर विस्तारै व्यवहारमा फरक आउन थाल्यो । केही समयपछि तीन जना नै एकै ओच्छ्यानमा सुतौं भने । हामी एउटै ओच्छ्यानमा सुत्न थाल्यौं ।
एउटै ओच्छ्यानमा सुत्न थालेपछि श्रीमानको राक्षसी रुप देख्न थालें । जेठी श्रीमतीलाई योनीमा सेक्स गर्थे । मलाई भने त्यही लिंग मुखमा लगाईदिने । उसले झारेको शुक्रकिट जबरजस्ती निल्नुपर्ने ।
विस्तारै थाहा भयो, जेठीले पनि श्रीमानको यौन चाहाना पुरा गर्नकै लागि भनेर मलाई बिहे गर्न सहमति दिएको रे । उनी ‘तँलाई त्यसैको लागि बिहे गर्न लगाएको, श्रीमान्को यौन चाहना पुरा गर्ने तैंले हो’ भनेर दिदी (पहिलेको श्रीमती) आफ्नी छोरीसँग छुट्टै कोठामा सुत्न थालिन् ।
मैले श्रीमानलाई तपाईंको व्यवहार मन परेन भन्न थालेपछि झन् जथाभावी शारीरिक सम्बन्ध राख्न थाल्यो । यतिसम्म कि, मेरो शरीरमा भएको प्वाल कँही पनि बाँकी नराखी अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध राख्ने ।
मैले नमान्दा शारीरिक यातना दिने । पछि काठमाडौं बस्ने भन्दै काठमाडौं लिएर आए । हामी २०७१ सालदेखि भक्तपुरमा बस्न थाल्यौं ।
मेरो श्रीमान धामी हुन् । उनीकहाँ धेरै मानिसहरु उपचार गर्न आउँथे । तर, अधिकांश बिरामी महिला हुन्थे । भक्तपुरमा बस्न थालेपछि पनि यौन व्यवहार भने सुध्रिएन । म बिरामी हुँदा औषधी उपचार पनि नगर्ने । कतै हिँडडुल गर्न पनि नदिने । कोठामा मात्र भइरहनु पर्ने । आमाहरुसँग फोनमा समेत कुरा गर्न नदिने गर्थे ।
भक्तपुर बसाइमा पनि मैले यौन यातना खेपिरहें । कहिले जबरजस्ती मुख, कहिले मलद्वार र नाक, कानमा समेत लिंग हाल्दिन्थे । यस्तो व्यवहार कति सहनु ? भनुँ कसरी कसलाई भनुँ ? कसैलाई भेट्न, फोनमा कुरा गर्न समेत अनुमति छैन । यस्तो कुरा कसैलाई सुनाएमा ज्यान मार्ने धम्की दिन थाले ।
एकदिन त्यस्तै जबर्जस्ती यौन सम्पर्क गर्दा धेरै गाह्रो भयो । म रोएँ, कराएँ र पनि छोडेन । बेहोस भएछु । मलाई काठमाडौंको केएमसी अस्पताल लगेको रहेछ । अस्पताल पुगेपछि मात्रै थाहा पाएँ ।
डाक्टरले स्वास्थ्यमा समस्या छ, ३ महिनासम्म यौन सम्पर्क नगर्नु भनेर औषधी पनि लेखिदिएका थिए । तर न यौन सम्पर्क गर्न छाडे न त औषधी नै किनिदिए । यौन यातना सँधै उस्तै ।
उसले जथाभावी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने गर्न थाल्यो । यतिसम्म कि, मेरो शरीरमा भएको प्वाल कँही पनि बाँकी नराखी अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध राख्ने । कहिले जबरजस्ती मुख, कहिले मलद्वार र नाक, कानमा समेत लिंग हाल्दिन्थ्यो।
एकदिन एक्कासी मलाई उपचार गर्ने भनी जहाजबाट विराटनगर लगे । सप्तकोशी अस्पतालमा भर्ना गरे । मलाई किन त्यहाँ पुर्याइएको पहिला केही भनिएको थिएन । तीन दिनपछि थाहा भयो मेरो त अप्रेसन गरि पाठेघर नै फ्याँकेको रे ।
थाहा पाएपछि म रोएँ । कराएँ । प्रश्न सोधेँ, किन यसो गरेको भने । ‘तेरो पनि बच्चा नहोस् भनेर पाठेघर फाल्न लगाएँ के गर्छेस् गर’ भनेर उल्टै हप्काउन थाले । उसको पनि पहिले नै परिवार नियोजन गरेको थियो रे ।
मेरो पाठेघर फालेपछि त झन् यातना बढ्यो । ‘तेरो पाठेघर छैन, तेरो योनीमा यौन सम्पर्क गर्दा मलाई सन्तुष्टि हुँदैन’ भन्दै उसको इच्छा जतिबेर हुन्छ, त्यति नै बेला मुखमा गर्थे ।
विभिन्न थरिले यौन सम्पर्क गरेको भिडियो हेरेर त्यस्तै गर् भन्थ्यो । आफू पनि त्यस्तै गथ्र्यो । ब्लू फिल्महरु देखाउने गर्थ्याे ।
हुँदाहुँदा ‘तँबाट सन्तुष्टि भएन भन्दै तेरो बहिनी, भदैनी गरी ७ जना मेरो लागि मिलाइ दे’ भन्न थाले । ‘उनीहरु नमिलाए तँ र तेरो माइतीका सबैलाई मार्दिन्छु’ भनेर धम्की दिइरहन थाले ।
यसले गर्दा मानसिक यातना पनि थपियो । शारीरिक यातना त झण्डै ४ वर्ष भयो, उस्तै छ । ३ वर्ष भक्तपुर बस्दा कतै निस्किन दिएनन् । पसल जान पनि नदिने । दिनभरि कोठामा नाङ्गै राख्ने । उसलाई मन लागेको बेला यौन सम्पर्क गर्ने । ट्वाइलेट जान्छु भनेपछि बेला बेलामा ढोका खोलिदिन्थे । नत्र बाहिरबाट चुुकुल लगाएर अर्को कोठामा झारफुकका लागि आउने बिरामीको उपचार गर्न भनेर जान्थे ।
यातना सहनै नसकेपछि २०७४ चैतदेखि सँगै बस्दिन । अहिले म एक्लै लुकेर बसेकी छु ।
घटना २ (महोत्तरी)
मेरो विहे भएको यहि असारमा एक वर्ष भयो । वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो भएको भए विहे भएको वर्ष पुगेको दिन रमाइलोसँग मनाइन्थ्यो होला । तर, यहि दिन मैले कठोर निर्णय लिएको छु, ‘मेरो जीवन यो श्रीमानसँग चल्दैन । म न्यायको लागि कानूनसंगत लड्छु ।
वैवाहिक जीवनको वर्ष दिनसम्म झेलेका कुरा पहिलोपटक दोस्रो मान्छेसँग सुनाउँदैछु –
मैले स्नातक अध्ययन गर्दै आफ्नै नाममा विद्यालय दर्ता गरेर प्रिन्सिपल भएर काम गरिरहेकी थिएँ ।
बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, २०७३ सालको माघमा बित्नुभयो । जीवनको अन्तिममा बुबाले आमालाई ‘हुर्केकी छोरी छ, बिहे चाँडै गर्दिनु मैलै गर्दिन सकिन’ भन्नुभएको थियो । त्यतिबेला म २८ वर्ष लागेकी थिएँ ।
बुबाकै कुराले होला आमालाई मेरो बिहे जति सक्यो चाँडो गरिदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको पाउँथे । यस्तैमा आफन्तबाटै एउटा केटाको कुरा आएछ ।
केटा तराइ (महोत्तरी) को । स्थायी शिक्षक । जग्गाजमिन धेरै भएको भनेर । तर उमेर अलि जेठो भनियो । केटा हेर्ने कुरा भयो । घरमा आयो । भेट भयो । कुरा गर्न लगाइयो मलाई पनि ।
किन हो कुन्नी केटा देख्नेबित्तिकै मलाई उ मन परेन । योसँग मेरो जीवन चल्दै चल्दैन भन्ने लाग्यो । आमालाई ‘कुनै हालतमा बिहे गर्दिनँ’ भनिदिएँ । धनी, जागिर भएको केटा भनेर मलाई कर लगाइयो ।
म ३० वर्ष पुग्न लागेको भनेर सबैले गाली गरे । अनुहार र उमेरले मात्र सबथोक हुने होइन भनियो । कर लगाइयो । म पनि चुप हुन बाध्य भएँ । बिहे चाँडै गर्ने कुरा भयो ।
बुबाको मृत्यु भएको वर्ष भएकाले ठूलो बिहे नगर्ने भन्दै घर बाहिरबाट टिकाटालो मात्रै लगाएर गर्ने भनियो । २०७४ असार १८ गते सामान्य रुपमा बिहे भयो ।
मेरा आफन्तहरु त थिए । केटाको पक्षबाट उसहित ३ जना आए । बिहान चाँडै आइपुगे । टिकाटालो, सिन्दुरपोते सकियो । धेरै समय लागेन । ४ जना भयौं । गाडी रिजर्भ गरेर ल्याइएको रहेछ । साँझ पर्नु अघि नै घर पुगियो ।
तर, घर पुग्नेबित्तिकै सपना हो कि विपना भन्ने भयो । मलाई भित्र्याएको घर कुखुराको खोर जस्तै थियो । भित्र पस्दा सासु रहिछन् । उनले अचम्म माने जसरी भनिन्, ‘ए आजै लिएर आएछ । हामीलाई घरमा त थाहा पनि थिएन ।’
धनी, जागिरे भनेर बिहे गरेको केटाको घर देख्नेबित्तिकै अचम्ममा परेकी म सासुकै त्यो कुराले त झन् छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ । बेलुकाको भात खाने बेला भयो । मलाई पनि खान भनियो । खान मनै लागेन । आँशु नदेखाई धेरै रोएँ । श्रीमान्ले खाना खाए र खुरुक्क सुत्न गए ।
त्यतै हो भनेर मलाई कसैले कोठा देखाइदियो, म कोठातिर गएँ । श्रीमान् सुतिसकेछन् । सानो कोठा, दुई जना कसरी अट्ने भनेको जस्तो खाट । भईँमा बस्नै पनि नमिल्ने फोहोर ।
उनी निदाए निदाएनन् थाहा भएन । म निकैबेर रोएँ । उनी केही बोलेनन् । फेर्ने कपडाहरु सबै छ भनेका थिए रे । त्यही भएर माइतीबाट एकजोर कपडा लगेको थिइनँ ।
बेहुली हुँदा लगाएकै कपडामा छु । बाध्य भएँ, बोल्नुपर्यो र सोधें म पनि सुत्ने यहीं हो ? कसरी सुत्ने ? मेरो प्रश्नको जवाफ आएन ।
बिहे त गरेर आइसकियो । जेसुकै होस् भनेर फेरि बोलाएँ, मलाई सुत्ने ठाउँ छैन भनें । ‘तँ जेसुकै गर्’ भनें । कहाली लागेर आयो । केही सोच्नै सकिनँ । उसँग सुतेको पनि छैन ।
काठले बारेको कोठा । अर्को कोठामा मान्छे बोलिरहेको सुनिन्छ । पहिलो रात नै झगडा गरेछ भनेर थाहा पाउलान् भनेर सानो स्वरमा भनें ‘मलाई आजै सुत्ने ठाउँ हुँदैन भने म किन तपाईंसँग बस्नु ? मलाई सिन्दुर त हालिहाल्नु भयो । भोलि सम्बन्ध विच्छेद गर्दिनु । म आजको रात सुत्दिन, यत्तिकै बस्छु’ भनेँ । बसिरहेँ ।
महिनावारी भएको दोस्रो दिन थियो । मैले धेरै रगत बगिरहेको छ भनें । तर जसरी पनि यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ भने, मैले मानिन । मैले नमानेपछि मलाई मार्छु भन्दै हान्नका लागि यताउता के के खोजे, दाँत माझ्ने ब्रस भेटेछन् । मेरो याेनीमा त्यही कोचिदिए ।
कपडा फेर्न पनि पाइन । बिहेको पहिलो रात यसैगरी बित्यो । दिमागले केही काम नगरे जस्तो भइरह्यो । आज किन यस्तो गरे, भोलिदेखि राम्रो होला नि भन्ने सोचें । तर पहिलो रात नै बिगे्रको सम्बन्ध के राम्रो हुन्थ्यो र ?
भोलिपल्टदेखि सँगै त सुत्यौं तर हाम्रो यौन सम्बन्ध राम्रो भएन । पहिलो पटक नै उनले जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखे । सायद पशुले नि त्यस्तो गर्दैन । हरेक रात यस्तै हुँदै गयो । रातको ४/५ पटकसम्म पनि यौन सम्बन्धका लागि तयार हुनुपर्ने, सुत्ने बेला भएपछि डर मात्रै लाग्थ्यो ।
एक वर्षको बीचमा कुनै दिन श्रीमानसँगको राम्रो शारीरिक सम्बन्ध भनेको कस्तो हुन्थ्यो भन्ने सोच्नै सकिनँ । किनकी, उनी यौन सम्बन्धका तयार हुँदा जताततै चिथोर्थे, जबर्जस्ती गर्थे । अप्राकृतिक व्यवहार गर्थे ।
बिहे भइसकेपछि एउटा बच्चा होस् भन्ने लाग्थ्यो । त्यसैले पनि श्रीमान्को यौन यातना सहेरै बसें । महिनावारी भएका बेला पनि सुख पाउँथिन ।
असार महिना यस्तै बित्यो । बिहे गरेको पहिलो साउन महिना श्रीमान् श्रीमती सँगै बस्न हुँदैन भनेर मलाई माइत पठाइयो । एक महिना माइती बसें । त्यसपछि भदौमा घर फर्किएँ ।
घर जाँदा महिनावारी भएको दोस्रो दिन थियो । मैले धेरै रगत बगिरहेको छ भनें । तर जसरी पनि यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ भने, मैले मानिन । मैले नमानेपछि मलाई मार्छु भन्दै हान्नका लागि यताउता के के खोजे, दाँत माझ्ने ब्रस भेटेछन् । मेरो याेनीमा त्यही कोचिदिए । त्यसपछि पनि पटक पटक जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखे । मेरो प्याड र रगत लतपत भयो । आफैंलाई बान्ता पनि आयो । केही समयपछि श्रीमान् निदाए ।
दिनभरि केही नबोल्ने । सानो कुरामा पनि निहुँ खोज्ने । मैले बोलेको हरेक कुरालाई उल्टो बुझेर फर्काउने । हुँदाहुँदा सबै भएको ठाउँमा पिट्ने । जस्तो पनि शब्द प्रयोग गरेर बोल्न थाले ।
म भने आखिर बिहे भइहाल्यो, एकदिन त सुधे्रलान् । बच्चा भएपछि म बलियो हुन्छु भन्ने सोचेर पीडाको पोको कसैसँग फुकाउने आँट गरिन् । समय बित्दै जाँदा सासु, देउरानी, श्रीमानहरु बसेर कोठामा केही सामान छैन त कहिले आउने हो ? भन्दै मसँग सोध्न थाले ।
मैले ‘आउँदैन त्यस्तो सामान भनेँ । सामान नआए पनि पैसा आउला यतै किन्नुपर्छ’ भनिरहन थाले । दाइजोको लागि बिहे गरेको रहेछ । त्यसपछि त अतिबाट पनि अत्याचार नै गर्न लागे । सहनै नसकने भएपछि गएको फागुनदेखि घर छोडेर माइत गएर बस्न थालें ।
मेरो परीक्षा थियो, काठमाडौं आएँ । त्यसयता काठमाडौंमै थिएँ । असार १३ गते ससुरा बिरामी भएर केएमसी अस्पतालमा राखेको थाहा पाएँ । आफ्नो कर्तव्य भनेर अस्पताल गएँ । ५ दिन अस्पतामै बसेँ । हस्पिटलमा भेटेर पनि श्रीमान् मसँग बोलेनन् । तर, एकदिन डाक्टर नर्स भएकै ठाउँमा ‘तँ किन आइस्’ भनेर कुट्न खोजे ।
एकदिन नन्द आएर मेरो घर भक्तपुर गएर दाइभाउजु आराम गर्नु । म अस्पताल बस्छु भनिन् । हामी नन्दकोमा जानलाई निस्क्यौं । तर सिनामगंल चोकमै मलाई तँ अस्ति नै देखि काठमाडौं आएर कोसँग बसिस् ? भनेर कराउन, कुटपिट गर्न थाले ।
पछि नन्देभाई त्यहीँ आइपुगे । सँगै भक्तपुर घर जाने भनेर आयौं । त्यहाँ दुई दिन, दुई रात बस्यौं । त्यहाँ पनि उनले गर्ने यौन सम्बन्धको प्रक्रिया त्यस्तै भयो । जून सामान्य मान्छेले गर्दै गर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई ।
मैले विहेपछिका कैयौँ रात उनको यौन यातना सहेँ । असार १७ गतेको रातीसमेत यसै गरी सम्बन्ध भयो । अब कति सहने ? भनेर बिहे गरेको एकवर्ष पुगेकै दिन अर्थात् असार १८ गतेकै दिन मैले अब यो मान्छेसँगको सम्बन्ध अघि नबढाउने निर्णय लिएँ ।
अब कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छु । कानूनी बाटोबाट उसलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने मेरो एक मात्र इच्छा छ । एक वर्ष मलाई जति कष्टपूर्ण अवस्थामा राख्यो, त्यसलाई कानूनले त्यस्तो बनाओस् भन्ने अब एउटै चाहना छ ।
घटना ३ (नुवाकोट)
मेरो घर नुवाकोट हो । २०५५ सालमा १० कक्षा पढ्दै गर्दा पे्रम विवाह भयो । त्यतिबेला १६ वर्षकी थिएँ । विवाह भएको १८ वर्षपछि अर्थात् २ वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छेद गरेँ ।
सम्बन्ध बिच्छेदको कारण हो, श्रीमानको यौन यातना सहन नसक्नु । बिहे गरेको २/३ महिनासम्म राम्रै थियो । तर त्यसपछि उनको व्यवहार फेरियो । सामान्य मान्छेले त त्यस्तो व्यवहार गर्दै गर्दैन । उसलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला म यौन सम्पर्कको लागि तयार हुनुपर्ने ।
घरका अरुले देख्लान् भन्ने डर पनि छैन । जहाँ पनि समाउने, जिस्क्याउने । छोराछोरीको अगाडी लाजमर्नु । समाजमा इज्जत जाला भन्ने डरले सबै यातना सहेरै बसेकी थिएँ ।
मेरा दुईजना बच्चा छन् । पहिलो बच्चा १७ वर्षमै जन्मियो । बच्चा जन्मिएको बेलामा पनि आफन्तहरुले ४\_५ दिन स्याहार गर्न बसेको बेला बाहेक यौनसम्बन्धका लागि तयार हुनुपर्थ्याे । दोस्रो बच्चा जन्मिएका बेला त झन् ३ दिनमै यौन सम्बन्ध राख्न आए । आफू सुत्केरी गलेकी थिएँ । प्रतिकार पनि गर्न सकिन ।
जिल्लामै हुँदा आफ्नै ब्यूटीपार्लर थियोे । काम गरिरहेको हुन्थें । उनलाई मन लागेपछि जुनसुकै बेला घर बोलाउने । नगए मोटरसाइकल लिएर पसलमै लिनै आउँथे । नमाने कुटपिट गर्थे ।
कति कुटाइ खानु भनेर लिन आएपछि पसल छोडेर जान्थेँ । घर गएपछि आफूलाई इच्छा नभएपछि यौन सम्पर्क गर्न पनि नमान्ने भनेर कुट्दै जबर्जस्ती गर्थे । म सँधै पीडा सहेर सहमति दिएको जस्तो अवस्थामा बस्थें ।
याैन यातना अति भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेर कानूनी प्रक्रियामा गएँ । पहिला बालाजु प्रहरीमा गएर श्रीमानले दिने सबै यातना र आफ्नो पीडा सुनाएँ । यौन यातनाको कुरा गरेँ । आफ्नै श्रीमान्ले सँधै बलात्कार नै गर्थे भनेँ । प्रहरीले पनि श्रीमान श्रीमतीबीच हुने यस्तो सम्बन्ध सामान्य हो भन्दै बस्नै नसके अंश र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हाल्न सुझायो ।
पछिल्लो ४/५ वर्ष यता काठमाडौं बस्न थालेका थियौं । उनी घरजग्गा कारोबार गर्थे । काठमाडौं आएपछि पनि यस्तो क्रम रोकिएन ।
तर सम्बन्ध विच्छेदमा लागि जानुको कारणचाहिँ भूकम्प हो । भूकम्पपछि पालमा बस्नु पर्ने भयो । घरमा हुँदा त ममाथि जबर्जस्ती भए पनि अरुले त देख्दैनथे । तर भूकम्पका बेला पालमा बस्दा पनि व्यवहार उस्तै भयो ।
खुला ठाउँको पालमा त धेरै परिवार बस्थे । तर त्यहाँ पनि घरमै जस्तो यौन सम्पर्कका लागि तयार हुनुपर्ने । जिस्क्याइरहने, चलाइरहने मान्छेले देखेर के भन्छन् भन्ने पनि नसोच्ने ।
अति भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेर कानूनी प्रक्रियामा गएँ । पहिला बालाजु प्रहरीमा गएर श्रीमानले दिने सबै यातना र आफ्नो पीडा सुनाएँ । यौन यातनाको कुरा गरेँ । आफ्नै श्रीमान्ले सँधै बलात्कार नै गर्थे भनेँ ।
मेरो जस्तो घटनामा वैवाहिक बलात्कारमै मुद्दा हाल्न सकिन्छ भन्ने थाहा थिएन । प्रहरीले पनि श्रीमान श्रीमतीबीच हुने यस्तो सम्बन्ध सामान्य हो भन्दै बस्नै नसके अंश र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हाल्न सुझायो ।
अंश दाबी गरेर अंश मुद्दा हाल्दा झन् यातना देलान् भनेर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा मात्र हालें, अंश दाबी गरिनँ । झण्डै एक वर्षमा फैसला भयो । सम्बन्ध विच्छेद भयो ।
अहिले मलाई आनन्द छ । त्यति कानूनी प्रक्रियामा नगएर वर्षांै पीडामा बसेछु भन्ने लाग्छ अहिले । त्यतिबेलाको कुटपिटले दायाँ हात चल्दैन, खुटले राम्रो टेक्न मिल्दैन । शरीर सबै दुख्छ । पेटभित्र पनि घाउ भए जस्तै पोलिरहन्छ ।
(गोपनियताका कारण पीडित महिलाका पहिचान खुलाइएको छैन ।)
यौन अत्याचार सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन् महिला
नेपाली समाजमा अझै पनि यौन कुरा लाजको विषय मानिन्छ । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका कुरा पाठ्यक्रममा भए पनि शिक्षकले नपढाइ विद्यार्थीलाई आफैं पढ भन्ने चलन हटिसकेको छैन । अझ श्रीमान श्रीमतीबीच हुने यौन सम्बन्धलाई त श्रीमानको हकको विषय ठानिन्छ ।
माथिका घटनाहरुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, अधिकांशले विवाहको अर्थ नै यौन हो भन्ने ठान्छन् र यसको भोगाधिकार पनि श्रीमानमा मात्रै छ भन्ने ठान्छन् । र श्रीमतीहरु आफ्नो शरीर र मनले धानुन्जेल यौन यातना सहिरन्छन् । विरोध गर्दा आफ्नै लाज हुने डरले सबै यातना सहन विवश हुन्छन् ।
तर, कानूनले श्रीमान श्रीमतीबीच पुरुषको हकले होइन सहमतीमा यौन सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने परिभाषित गरिसकेको छ । श्रीमान श्रीमतीबीच जबरजस्ती यौन सम्बन्ध भए त्यसलाई बैवाहिक बलात्कारको रुपमा कानूनले व्याख्या गरेको छ ।
अझ अर्को पाटो, महिलाले यौन यातनाको कारण कानूनी उपचार खोज्दा घरेलु हिंसा, सम्बन्ध बिच्छेद वा अंश मुद्दा हुने गरेको पनि पाइन्छ । महिला हिंसा विरुद्ध काम गर्दै आएको कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) का अनुसार सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म ८ जनाले श्रीमान्बाट जबर्जस्ती करणी भएको बताएका थिए ।
ल्याकले वार्षिक तीनहजार महिलालाई सेवा दिने गरेको संस्थाको भनाइ छ । संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता अनिता थपलियाका अनुसार घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको भनेर आउने मध्ये अधिकांशमा यौन सम्बन्धको विषय जोडिने गरेको छ ।
तर धेरै परामर्शपछि मात्रै पीडितले सम्बन्ध बिग्रनुको रहस्य खोल्छन्, ‘यौन सम्बन्धमा श्रीमान्को जबर्जस्ती सहनै नसकेपछि घरेलु हिंसा, मानाचामल, अंश र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा महिलाहरु जान्छन् । तर वैवाहिक बलात्कारमा पनि कानून छ भन्दा पनि महिलाहरु यसमा मुद्दा अघि बढाउनै नमान्ने अनुभव अधिवक्ता थपलियाको छ ।
यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाका अनुसार श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रने मुख्य कारणहरु मध्ये यौन सम्बन्ध पनि एक हो । सम्बन्ध बिग्रिंदै गएपछि हिंसा सुरु भएर चरम रुप लिन्छ । तर महिलाहरु यो पीडालाई बाहिर ल्याउनै सक्दैनन् । उनीहरुलाई समाज, परिवार लगायतका इज्जतले बाँधेको हुन्छ ।
वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउन माग गर्दै अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०५८ सालमा हालेको रिटमा २०५९ साल बैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाका अनुसार अहिले कानून भएर पनि महिलाहरु पीडित भइरहेका छन् । पहिले कानून थिएन । तर अहिले कानून भएर पनि उजुरी पर्दैन । वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘अब उजुरी किन पर्दैन भनेर राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
त्यसका साथै यौनको विषयलाई लुकाएर राख्ने विषय होइन । जनचेतनासँगै भएका कानूनको बारेमा पनि सबैसँग जानकारी पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यौन सम्बन्धको लागि दुबै तयार हुनुपर्छ
मनोचिकित्सक डा. सरोज ओझा, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज
मनोचिकित्सक डा. सरोज ओझा यौन सम्बन्धको मामलामा तीन थरी विचार भएका व्यक्ति हुने बताउँछन् । त्यही विचारबाट निर्देशित भएर नै यौन सम्बन्धका बेला श्रीमानले श्रीमतीसँग गर्ने व्यवहार छुट्टाछुट्टै हुन्छन् ।
पहिलो खालका पुरुष अरुलाई हुने पीडाले सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् । उनीहरुको बानी नै दोस्रोको पीडामा रमाउने भइसकेको हुन्छ । यौन पार्टनर रुँदा, कराउँदा, ऐया गर्दा वा तनावमा देखिदा उ खुसी हुन्छ ।
दोस्रो थरीका पुरुषमा अत्याधिक यौन चाहना हुन्छ । जसका कारण उ आफ्नो पाटर्नरको इच्छा छ कि छैन भन्ने कुरामा मतलब नै गर्दैन । श्रीमतीलाई इच्छा नलागेको पनि हुन सक्छ, अथवा उसलाई इच्छा लाग्ने बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैन । आफूलाई मनलागेपछि जबर्जस्ती गरिहाल्छ । यसप्रकारका व्यक्तिबाट पार्टनरमाथि असह्य पीडा भइरहन्छ ।
तेस्रो खालका पुरुष रक्सी खाने तथा लागूऔषध दुर्व्यसनीमा फसेका हुन्छन् । यिनीहरुले पनि श्रीमतीसँगको यौन क्रियाकलापमा समझदारीको मतलब गर्दैनन् । आफूलाई मन लाग्दा श्रीमतीको मन छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै हेक्का हुँदैन ।
डा. ओझाका अनुसार यौन सम्बन्धका लागि दुवै जना यौन पार्टनर उत्तिकै तयार हुनुपर्छ । पुरुषले चाहेकै बेला महिला यौन सम्बन्धका लागि तयार नहुन सक्छिन् । त्यसका लागि पुरुषले उनलाई तयार गर्ने क्रियाकलाप गर्न जरुरी हुन्छ । यसो हुँदा दुवै जनाको यौन सम्बन्ध स्वस्थ र सन्तुष्ट हुन्छ । श्रीमान श्रीमतीको सबै सम्बन्ध मजबुद बनाउँनका लागि सबैभन्दा पहिले यौन सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ ।
अहिले त श्रीमतीको इच्छा विपरित श्रीमान्ले जबरजस्ती गर्न हुँदैन भनेर नेपालमा दण्ड सजायको व्यवस्था पनि छ । तर यो कुरा पनि सबैलाई जानकारी छैन । कानून र दण्ड सजायको कुरा थाहा पाउने हो भने त्यस्ता मान्छेहरु केही हदसम्म सचेत हुने र पनि डा. ओझा बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले कानून बनाउन भनेर परमादेश जारी गरेको ४ वर्षपछि नेपालमा बैवाहिक बलात्कारको विरुद्ध कानून बन्यो ।
लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३, मा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्दै श्रीमानले गर्ने जबर्जस्ती करणीमा ३ देखि ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गर्न थालेको हो । नेपालमा यो नै वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी पहिलो कानून हो ।
त्यसपछि लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले बैवाहिक बलात्कारमा दण्ड सजाय बढाएर ३ देखि ५ वर्ष पुर्याएको छ ।
सोही ऐनअनुसार वैवाहिक बलात्कारको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट श्रीमतीलाई तत्काल वा मुद्दा किनारा नहुँदासम्म दुवै एकै ठाउँमा बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था भए पतिलाई तत्काल अलग बस्ने आदेश अदालतले दिन सक्छ । यसअनुसार श्रीमानले गर्ने जबर्जस्ती करणीको घटनाको हदम्याद ६ महिना तोकिएको छ ।
आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ४ अनुसार बैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
यस ऐनले पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिई छुट्टै बसेको, पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको अवस्थालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको मानेको छैन ।
तर पीडितको अवस्था र माग बमोजिम आवश्यक भएमा अदालतले पतिको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ –
अपराध संहिताले उजुरीको हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुर्याएको छ । जुन सकारात्मक हो । यस्तै कैद सजाय ५ वर्षसम्म हुने भनिएको छ । यसमा न्यूनतम कैद सजाय राखिएको छैन, त्यसले गर्दा न्यूनतम सजाय कति गर्ने न्यायधीशको स्वविवेकमा भर पर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाका अनुसार कैद सजायमा तल्लो हद राख्नु उपयुक्त हुन्छ । तल्लो हद नहुँदा एकदिन कैद गरे पनि पुग्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा पनि तल्लो हद राखिएको भए उपयुक्त हुने उनले बताईन् ।
हालसम्मको कानूनमा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ । जसमा कम्तीमा ३ वर्ष कैद सजायको फैसला अदालतहरुको आदेशमा देखिन्छ ।
(पत्रकार लक्ष्मी बस्नेत काठमाडाैंबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ)